नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीमा स्थान बनाउन सक्ने सम्भावित पाँच अनुहार | KhelNepal
नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीमा स्थान बनाउन सक्ने सम्भावित पाँच अनुहार
काठमाडौं – भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल । पछिल्लो समय नेपाली महिला तथा पूरुष भलिबलले विकासको फड्को मार्दै छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेल तथा एक्पोजरको हिसावमा भन्ने हो भने नेपाली महिला भलिबल राष्ट्रिय टोली दुई वर्ष यता गुप चुप छ ।
नेपाली भलिबल विकासमा सभामुख कप, ढोरपाटन कप, आईजीपी कप, न्यु डायमण्ड कप जस्ता भलिबलका गतिला उदाहरण हुन् । नेपाली महिला भलिबल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पूरुष भलिबलको दाँजोमा निकै मथिल्लो स्तरमा छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलहरु नभएको धेरै समय भयो ।
अन्तिम पटक नेपाली महिला भलिबले एसियन सेन्ट्रल जोन वुमन्स भलिबल खेल्ने मौका पाएको थियो । उक्त भलिबल प्रतियोगितामा नेपालले फाइनलसम्म स्थान बनाइसकेको अवस्था थियो । संयोगवस नेपालले फाइनलमा इरानसंग हार बेहोर्नु परेको थियो ।
नेपाली महिला भलिबलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रोन्ज मेडल पनि भित्र्याइसकेको छ । तर, २०१७ देखी नेपाली महिला भलिबलको राष्ट्रिय टोली कुन स्थितिमा छ, हालसम्म पनि अत्तो पत्तो छैन ।
राष्ट्रिय टोलीबाट अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलका महिला भलिबल खेलाडी नेपालमा हुने डोमेष्टिक लिगहरुमा जम्काभेट गरेर चित्त बुझाउँछन् ।
हाल नेपाल भलिबल संघले महिला भलिबल खेलाडीलाई २०१९ भित्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तयारीको लागि पढाउने योजना बनाएको छ । सोहि योजना अनुसार केहि नयाँ अनुहारले पनि नेपाली महिला भलिबल टोलीमा स्थान बनाउने पक्का छ ।
हामी अब नेपाली महिला भलिबलको राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सक्ने उत्कृष्ट ५ अनुहारको चर्चा गर्ने छौ ।
नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबलमा स्थान बनाउन सक्ने ५ सम्भावित अनुहार यस प्रकार छन् :
५. . पुजा चौधरी
सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ क्लबबाट खेल्ने पुजा चौधरी हाल एपीएफ टिमको लागि बलियो खेलाडी रुपमा स्थान बनाउन सफल भएकी छन् ।
पुजाले एपीएफबाट राष्ट्रिय स्तरका प्राय खेलमा डेब्यू गरि सकेकी छन् । ओपन स्पाइकरको भुमिकामा रहने उनको खेल हेर्न लाएक हुन्छ ।
पुजाले हालसम्म विभिन्न प्रतियोगितामा गरेको प्रदर्शनको आधारले नै उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । उसोत पोखरामा भर्खरै सम्पन्न सभामुख कप महिला भलिबलमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल उनि एपीएफकी पहिलो रोजाइ बनिसकेकी छन् ।
नेपालगंजको चप्पर गैडिमा जन्मिएकी पुजा एपीएफबाट खेल्न थालेको मात्र ६ महिना बित्न लाग्यो । उनले एपीएफबाट ४ प्रतियोगितामा खेलीसकेकी छन् ।
कमै समयमा पनि उनको भलिबल खेलमा ठुलो विकास भएको एपीएफका प्रशिक्षक ज्ञानेन्द्र बिष्टको बुझाइ छ । यदि नेपाली महिला राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण भई पुन टिम बनाएमा भने उनले स्थान बनाउने सम्भावन धेरै छ ।
४. उशा भण्डारी
अग्लो कद, हसिलो अनुहार, सानै उमेरमा भलिबल प्रति उनको लगाव । उशा भण्डारी विभागिय क्लब नेपाल पुलिसकी पहिलो रोजाईकी खेलाडी हुन् । स्पाइकरको भुमिका निभाउने उनि अहिले डोमेष्टिक लिगहरुमा राम्रो खेलाडीको छबि बनाउन सफल छन् । नेपाल पुलिस एकेडेमिकी उत्पादन उनी भर्खर १४ वर्ष पुग्न लागिन् ।
उनलको खेल प्रदर्शन र खुबीले उनको उमेरसंग तुलना गर्ने सबैलाई चकित बनाउँछ । तनहु घर भएकी उशाले आफ्नो जादुमय खेल प्रदर्शन गर्दै १४ औँ ढोरपाटन महिला मलिबल लिगमा उत्कृष्ट स्पाइकरको पुरस्कार पनि जित्न सफल भईन् ।
न्यु डायमण्ड कप, सभामुख कप, ढोरपाटन मा उनले गरको उत्कृष्ट प्रदर्शन नै उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा पुग्ने मुख्य आधारस्तम्भ हो । उशाले हाल सम्म नेपाल पुलिसबाट १५ जति प्रतियोगिता खेली सकेकि छन् ।
३. पुनम चन्द
महेन्द्रनगर कञ्चनपुरमा जन्मिएकी पुनम चन्द नेपालमा हुने डोमेस्टीक लिगहरुमा कहिले प्रदेश त कहिले फ्रेन्चाइज लिगहरुमा उत्कृष्ट देखिने पहिलो अनुहार हो । पुनम २०१७ मा महेन्द्रनगरबाट बुटवल भलिबल खेल्नको लागि आईन् त्यो बेला देखि नै उनको जीवनले अर्को मोड लियो ।
पुनमलाई एभरेष्ट स्कुलका प्रशिक्षक अर्जुन घिमिरेले भलिबलमा लाग्न प्रेरण दिलाएका हुन् । स्कुल लेबलको भलिबलबाट उत्कृष्ट ठहरिएकी पुनमले चितवन टाइगर्स, पोखरा लगायतका ठुला क्लबबाट पनि भलिबल खेल्ने अवसर पाइन् ।
पुनमले खेलेका सम्पुर्ण खेलहरुमा उनको उत्कृष्ट खेल नै देख्न सकिन्थ्यो । पुनमले भर्खरै मात्र पश्चिमाञ्चल पोखराबाट ढोरपाटन महिला भलिबल लिग खेल्ने अवशर आइन ।
ढोरपाटनमा पनि उनको प्रदर्शन हेर्न लाएक थियो । पुनमले हाल सम्म ५० भन्दा धेरै खेल खेलिसकेकि छन् । नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीको छनोटमा पुनम पनि एक सम्भावित अनुहार हुन् ।
२. कामना बिष्ठ
नेपाली भलिब क्विन कामना बिष्ट । नेपाल पुलिस क्लबकी भरपर्दो खेलाडी हुन् । उनि नेपाल पुलिसकी भरपर्दो खेलाडी मात्र होइनन् नेपाली भलिबलकी भविश्य पनि हुन् ।
मध्यपश्चिमाञ्चलबाट आफ्नो भलिबल यात्रा शुरु गरेकी उनले २०७३ सालमा पुलिस क्लबमा पहिला टेकिन् । कामनालाई नेपाल पुलिसक्लब सम्म पुग्न उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन र कोपिला रानाको ठुलो योगदान छ ।
कामना २०७४ सालमा एनभीए इमर्जिङ प्लेअरको अवार्डबाट पनि सम्मानित भै सकेकी छन् । कामाना हाल खुट्टाको समस्याको कारण कोर्ट बाहिर छन् । कामनाले नेपाल पुलिसबाट चाँडै पुर्ण रुपमा कमब्याक गर्ने योजना बनाएकी छन् ।
१८ वर्षीय कामनाले हाल सम्म पुलिसका लागि खेलेको सबै खेलहरुमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल छन् । उनको सोहि प्रदर्शनलाई आधार मानेर उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा पर्न असहज भने हुने छैन् ।
१. निरुता ठगुन्ना
दार्चुलामा जन्मिएकि निरुता त्रिभुवन आर्मीको पहिलो रोजाईँका खेलाडी हुन् । हाल भैरहेका विभिन्न महिला भलिबलका लिगहरुमा उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन देख्न पाहिन्छ । निरुता सानोमा एथेलेटिक्स खेलाडी थिइन् । विद्यालयका शिक्षकको सल्लाहबाट उनि भलिबलमा प्रवेश गरिन ।
उनले जनता सेकेन्डरी स्कुलबाट पहिलो राष्ट्रिय स्तरको भलिबल खेल खेल्ने अवसर पइन् । निरुताले दार्चुला, सुदूरपश्चिम लगायतका टिमबाट पनि भलिबल खेल्ने अवसर पाइन् ।
२० वर्षीय निरुताले त्रिभुवन आर्मि क्लबबाट खेल्न थालेको करिब दुई वर्ष भयो । उनले २०७५ सालको एनभीए अवार्ड पनि हात पारिसकेकी छिन् । आर्मीको पहिलो रोजाइको खेलाडी निरुता भर्खरै सम्पन्न ढोरपाटन महिला भलिबल लिगमा पनि उत्कृष्ट नै भईन् । उनको लगातारको उत्कृष्ट प्रदर्शनले नेपाली महिला भलिबलको राष्ट्रिय टोलीमा पर्ने सम्भावना धेरै बनाएको छ ।
हाल नेपाली महिला राष्ट्रिय भलिबल टोली
बिनिता बुढाथोकी (कप्तान), मञ्जु गुरुङ (उप–कप्तान), सरस्वती चौधरी, प्रतिभा मालि, नेबिका चौधरी, रेश्मा भण्डारी, अरुणा शाही, कोपीला उप्रेती, उशा कुमारी बिष्ठ, मनिशा चौधरी, कृपा अधिकारी, कमला पुन ।
२०७५ माघ २४, बिहीबार मा प्रकाशित